Mo Farah oo labo jeer ka baaqday baaris - BBC Somali
Mo Farah oo labo jeer ka baaqday baaris
18 Juunyo 2015
Oradyahan Mo Faarax, ayaa seegay laba baaritaan oo lagu sameyn lahaa oo ah inuu isticmaalay dawooyin awoodda jirka xoojiya iyo inkale ka hor ciyaarihii Olimbikada ee London 2012-kii, wargays ayaa sidaa ku dooday.
Warkan ayaa ku soo beegmaya kaddib markii baaritaan ay BBC samaysay lagu eedeeyay tababarihiisa Maraykanka ah in uu dawooyin noocaas ah adeegsado.
Biladaha dahabka ee Mo Farah ee shanta iyo tobanka kun ee mitir ee uu ku guulaystay ciyaarihii London 2012-kii, ayaa ka mid ahaa muuqaaladii ugu qiimaha badnaa ee ciyaarahaas.
Hasayeeshee, waxaa haatan la sheegayaa in ay suuragal tahay in ay biladahaasi khatar geli karaan.
Sida uu sheegay wargeyska Daily Mail, oradyahankan masaafadda dhexe ee reer Britain ayaanan 2010-kii lagu sameyn baaritaan dhanka adeegsiga dawooyinka jirka xoojiya, hadana wuxuu ka baaqday baaritaan kale sanaddii xigtay.
Haddii uu mar saddexaad muddo 18 bilood gudahood ah ka baaqan lahaa baaritaanaddan, waxaa macnuhu noqon lahaa in Mo Faarax afar sano laga mamnuuco oradka, arrintaana waxa ay ka hor istaagi laheyd inuu ka qeyb qaato ciyaaraha Olimbikada ee ka dhacayay dalkiisa.
Arrimahan oo dhan ayaa imanaya kaddib eedo ku soo muuqday barnaamij BBCda ka baxay laba todobaad ka hor, kaasoo lagu sheegay in tababaraha Mo Faarax ee Ameerikaanka ah, Alberto Salazar iyo ciyaaryahanka ay wada-tababartaan ee Galen Rupp ay ku lug lahaayeen isticmaalka dawooyinka quwadda siiyo ciyaaryahanada.
Wargeyska the Daily Mail, ayaa sheegay in markii koowaad ee uu Mo Faarax ka baaqsaday baaritaanka ay u muuqato in ay aheyd dhowr bilood ka hor inta aanu haystaha labada biladood ee Olympicada u tagin si uu u tababaro Salazar oo degan Oregon horaantii sanadkii 2011.
Waxaa wargaysku sheegayaa in gafidda labaad ay dhacday markaas kadib , hasayeeshee oradyahanka uu racfaan u dirsaday wakaaladda u xilsaaran UK ka hortagga isticmaalka dawooyinka xoojiya ciyaartoyda ee UK Anti-Doping Agency, isagoo ku dooday in uusan maqlin ganbaleelka albaabkiisa markii ay dadka sameeya tijaabada ay yimaadeen gurigiisa.
Mo Faarax ayaa haatan waxa uu ku tababaranayaa waddanka Faransiiska isagoo xaqiijiyay in markii ugu horreysay uu tartan ka qaybgali doono tan iyo soo ifbixii eedahana adeegsiga dawooyinka awoodda jirka kordhiyaee tababarihiisa loo soo jeediyay.